एकीकरण जरूरी थियो भने एकीकरणको पहिलो इँट्टा राख्नेलाई सम्मान गरौँ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
एकीकरण जरूरी थियो भने एकीकरणको पहिलो इँट्टा राख्नेलाई सम्मान गरौँ
प्रकाशित मिति : २०७७, २६ पुष आईतवार २१:१९
हो, पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्दै गर्दा सिङ्गो नेपालको चित्र उनको मनमा थिएन होला, टुक्रा-टुक्रा हुँदा भोलि अंग्रेजजस्तै अर्को बाह्य शक्तिले सजिलै निल्न सक्छ भन्ने दूरदृष्टि थिएन होला ।
स्वतन्त्रताको नाममा घरको भित्तो नै फोड्ने बाटोमा नहिँडौं ! कि बाइसे-चौबीसे राज्य नै ठीक थियो र अहिले पनि त्यसको सम्भाव्यता छ भनेर वकालत गरौँ, होइन, एकीकरण जरूरी थियो भने एकीकरणको पहिलो ईंटा राख्नेलाई सम्मान गरौँ ।
काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता डा. भीम रावलले आफूहरुले नेतृत्व गरेको नेकपा